တွေ့မြင်နေကျပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေနဲ့ မိမိုက်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ယုသန္တာတင်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ.. - ပညာ ပါဝါ
တွေ့မြင်နေကျပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေနဲ့ မိမိုက်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ယုသန္တာတင်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ..
admin . admin | 27/03/2022 | Celebrity | No Comments
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ…အပြုံးချိုချိုလေး နဲ့ အေးချမ်းတဲ့ မျက်နှာလေး ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မြင်လိုက်ရုံ နဲ့တင် အချစ်ပိုသွားရလောက်အောင်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအလှနဲ့ ဖမ်းစားညို့ယူနိုင်တဲ့ မင်းသမီးလေးကတော့ ယုသန္တာတင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
သူမဟာ အနုပညာလောကမှာနေရာတစ်နေရာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရရှိထားပြီးတော့ ပရိသတ်တွေလည်း အခိုင်မာ ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ဘယ်လိုဇာတ်ကောင်မျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် သဘာဝကျကျ ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။သူမ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကလည်း ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ယုသန္တာတင်ဟာ ယနေ့အချိန်ထိ ပင်ကိုယ်အလှတရားတွေအပြည့်နဲ့ နုပျိုနေဆဲဖြစ်ပြီး ချောမောလှပနေတုန်းပါပဲနော်။သွယ်လျကျစ်လျစ်တဲ့ သေးသေးသွယ်သွယ် ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် အဝတ်အစားလေးတွေဝတ်ရင် သူမခန္ဓာကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး ချစ်စရာကောင်း သူဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်ရအောင် ဖော်ပြပေးလေ့ရှိပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ မြင်နေကျပုံစံတွေနဲ့မတူပဲ ဖက်ရှင်အမိုက်စားလေးနဲ့ လှရက်လွန်းနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို သူရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပုံလေးတွေတိုင်းမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ လှရက် လွန်းနေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုစေမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး လှရက်လွန်းနေတဲ့ မျက်နှာလေး ကို ပုံရိပ်လေး တွေ ထဲမှာ အထင်းသားမြင်တွေ့ရပါတယ်နော်။
ယုရဲ့ ခေတ်ဆန်ဆန် ဖက်ရှင်ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း ချစ်ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ယုလည်း ဒီထက်မက အောင်မြင်မှုရရှိပါစေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source Yu Thanda Tin
ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးေရ…အၿပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလး နဲ႔ ေအးခ်မ္းတဲ့ မ်က္ႏွာေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ျမင္လိုက္႐ုံ နဲ႔တင္ အခ်စ္ပိုသြားရေလာက္ေအာင္ကို ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းအလွနဲ႔ ဖမ္းစားညိဳ႕ယူႏိုင္တဲ့ မင္းသမီးေလးကေတာ့ ယုသႏၲာတင္ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
သူမဟာ အႏုပညာေလာကမွာေနရာတစ္ေနရာကိုပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ရရွိထားၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေတြလည္း အခိုင္မာ ရရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာလည္း ဘယ္လိုဇာတ္ေကာင္မ်ိဳးေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ သဘာဝက်က် ပီျပင္ေအာင္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။သူမ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ဇာတ္ကားေတြကလည္း ပရိသတ္ေတြအႀကိဳက္ေတြ႕ေစခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားေတြပဲျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ယုသႏၲာတင္ဟာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ပင္ကိုယ္အလွတရားေတြအျပည့္နဲ႔ ႏုပ်ိဳေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေခ်ာေမာလွပေနတုန္းပါပဲေနာ္။သြယ္လ်က်စ္လ်စ္တဲ့ ေသးေသးသြယ္သြယ္ ခႏၶာကိုယ္ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အဝတ္အစားေလးေတြဝတ္ရင္ သူမခႏၶာကိုယ္နဲ႔ လိုက္ဖက္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္း သူျဖစ္ပါတယ္။
သူမရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေလးေတြကိုလည္း ပရိသတ္ေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ရေအာင္ ေဖာ္ျပေပးေလ့ရွိပါတယ္ ။ လတ္တေလာမွာေတာ့ ျမင္ေနက်ပုံစံေတြနဲ႔မတူပဲ ဖက္ရွင္အမိုက္စားေလးနဲ႔ လွရက္လြန္းေနတဲ့ ပုံေလးေတြကို သူရဲ႕ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ပုံေလးေတြတိုင္းမွာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိရွိနဲ႔ လွရက္ လြန္းေနတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ အခ်စ္ပိုေစမွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ယုရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး လွရက္လြန္းေနတဲ့ မ်က္ႏွာေလး ကို ပုံရိပ္ေလး ေတြ ထဲမွာ အထင္းသားျမင္ေတြ႕ရပါတယ္ေနာ္။
ယုရဲ႕ ေခတ္ဆန္ဆန္ ဖက္ရွင္ပုံရိပ္ေလးေတြကိုလည္း ခ်စ္ပရိသတ္ေတြ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေစရန္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ယုလည္း ဒီထက္မက ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါေစ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ကွယ်လွန်သွားတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်သူမင်းသွေးအပေါ် ယနေ့ထိ သစ္စာရှိရှိလွမ်းဆွတ်သတိရနေဆဲဖြစ်တဲ့ မင်းသွေးချစ်သူကောင်မလေး..
ဒီလိုကာလမျိုးမှာမှ သူမတို့နေထိုင်ရာအိမ်ရာမှာရှိတဲ့ မီးကြိုးတွေ ဖြုတ်ခိုးခံနေရလို့ ရင်ဘတ်စည်တီးနေတဲ့ ဆိုဗီယက်ပြန်နွဲ့နွဲ့စန်း…
အီတလီမှာမွေးပြီး ဒီမှာပဲ ကြီးပြင်းလာတဲ့ သမီးလေး Pilar ကို မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ မြန်မာစကားကိုလည်းမမေ့မလျော့ သင်ကြားပေးနေတဲ့ ချမ်းချမ်းရဲ့ဗီဒီယိုလေး..
ကောင်လေးတယောက်နဲ့တွဲဆော့ထားတဲ့ Tiktok ဗီဒီယိုလေးကြောင့် ချစ်သူရနေပြီလားလို့ ပရိတ်သတ်တွေ မေးခွန်းထုတ်တာခံနေရတဲ့ မိတ်ကပ်လင်းလင်း…
admin . admin
သူမတောင် မသိလိုက်ဘဲ Fan Pages တွေဖွင့်ပြီးပြန်ရောင်းစားကာ ကိုယ်ကျိုးရှာနေသူတွေကို သတိပေးစကားဆိုလိုက်တဲ့ မေမီကိုကို…
Boycott လုပ်ရမယ့်အစား ဆိုင်ကိုပါကြော်ငြာပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တခုကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ အပြင်းအထန် ဝေဖန်တာခံနေရတဲ့နန်းစုရတီစိုး..
တစုံတယောက်နဲ့ တော်တော်လေးဆင်နေတဲ့ ချစ်သူ စစ်ဗိုလ်မှူးကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ ထင်ကြေးအမျိုးမျိုးပေးခံနေရတဲ့ အေးမြတ်သူ..
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ လင်းမြတ်ရဲ့ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲလေးကို အချိန်မီရုံလေး ရောက်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ ခေးဆက်သွင်…
မိတ္ထီလာကန်မှာ ဖားကောက်ခဲ့ပါဆိုတဲ့သီချင်းကို အားရပါးရသီဆိုနေတဲ့ သမီးလေး ခင်လင်းထင်ရဲ့ ချစ်စရာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို တင်ပေးလာတဲ့ မေမေ ဒီးဒီ…